Jamaal Maxamed Xasan Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa booqanaya deegaano ka tirsan dhulka uu ka arrimiyo maamulka Soomaaliyeed ee Puntland. Booqashada wasiirka waa mid wanaagsan, laakiin waxaa ka soo laabanaya su’aallo badan oo tuhun galinaya dadka bulshda Soomaaliyeed. Waa Kuma Wasiir Jamaal? Jamaal waa safiirkii hore ee dowladdii Xasan...
Maamulka Somaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay War la sheegay in uu kasoo baxay Kooxda Xuutiyiinta oo ku aadana in ay gantaallo ku garaaci doonto Magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera Muuqaal dhawaan lagu baahiyay Baraha Bulshadda ayaa lagu soo bandhigay Rag u muuqday in ay ka tirsan yihiin kooxda Xuutiyiinta ee ka dagaallama Yemen oo hanjabaado u soo diraya Somaliland. Sacad...
Warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay Goobjoog News, ayaa sheegaya in maanta oo Arbaco ah aanu maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir tagi doonin siyaasi C/raxmaan Cabdi Shakuur. Lama hubo in maxkamadda ay tagi doonaan qareennada C/raxmaan iyo in kale, balse waxaa naloo xaqiijiyey in shaqsi ahaan aanu C/raxmaan Tagi doonin maxkamadda. Maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir...
Maanta oo Arbaco ah ayaa lagu wadaa in baarlamaanka maamulka Hirshabelle ay codka kalsoonida ah u qaadaan wasiirada cusub ee maamulkaasi. Maxamuud Xasan Wabar oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka maamulkaasi ayaa sheegay in maanta ay rajeynayaan in codka loo qaado wasiiradan. Waxa uu tilmaamay in la xalliyey caqabado yar oo taagnaa kuwaasi oo sababay in maalintii shalay...
Bishii January, waxaa dhacay doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, waxaana markii ugu horreeysay uu dalku yeeshay Aqalka sare, kaas oo sanadkaan la dareemay jiritaankiisa, ka sokow dhismaha hay’adihiisa, aqalkaan waxaa uu qabtay sharciyo iyo xallinta khilaafaadyo jiray. Doorashada Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee February...
Wakiilka Qaramada Midoobay ee arrimaha Somaliya Michael Keating oo ka hadlaayay xaaladda Somaliya, ayaa sheegay Shabaab weli inay leeyihiin awood muuqata oo ku aadan dagaalka Somaliya. Keating, ayaa wuxuu tilmaamay Xoogaga Shabaab inay weli awood u leeyihiin fulinta weeraro ay ka gaystaan Gobolada dalka Somaliya iyo Muqdisho. Wuxuu sheegay Shabaab inay ka faa’iideysanayaan...
Wararka naga soo gaarayo magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle ayaa soo sheegayo in uu kooram la’aan u baaqday Kulankii ay xildhibaanada maanta ku lahaayeen Jowhar, kulankaasi oo ahaa mid deg deg ah oo uu codsaday Madaxweynaha Hirshabeelle. Guddoonka Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa warbaahinta u sheegay in kooram la’aan uu ubaaqday Shirkii deg dega ahaa...
Magaalada Baydhaba ee Xarunta Gobolka Baay waxaa ka furmay shir u dhaxeeya Baarlamaannada Dowlad Goboleedyada iyo Baarlamaanka Golaha shacabka Soomaaliya. Shirkan oo uu guddoomiynayo Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari,ayaa waxaa ka qeybgelaya Guddoomiyayaasha Baarlamaannada Maamullada Puntland,Galmudug,Hirshabeelle,Koofur Galbeed iyo Jubaland. Ajendaha shirkan ayaa lagu sheegay...
Toogasho Caawa Ka Dhacday Magaaladda Muqdisho
Kooxo hubeysan ayaa ruux rayid ahaa maqribkii caawa ku dilay Xaafadda Towfiiq degmada Yaaqshiid ee Magaaladda Muqdisho. Sida dadka deegaanka ay inoo sheegeen,Labo dhalinyaro ah ayaa fulisay dilka ruuxa rayidka ahaa. Lama oga waxa uu yahay ruuxa dilka loo geystay,waxaana goobta gaaray oo meydka qaaday Ciidamo ka tirsan kuwa Dowadda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale ma jirto...
Eedeymo Musuqmaasuq ah oo lagu eedeeyay Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka
Wasaarada Haweenka iyo Horomarinta Xaquuqda Aadanaha DFee Soomaaliya ayaa lagu eedeeyey Musuq Maasuq iyo wax is dabamarin in ay ku sameysay Guddiga Madaxa Banaan ee Xaquuqda Aadanaha kuwaasi oo ay dooranayeen Ergooyin laga soo kala xuley Maamul Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir kuwaasi oo ka koobnaa 19 Ergo. Ergada ka timid Maamul Goboleedyada oo tababar ay siiyeen Khubaro...
Maxkamadda Gobolka Nugaal oo Xukun ku Riday Dhalinyaro Dhac Ka geystay Garoowe
Maxkamada Darajada koowaad ee gobolka Nugaal, ayaa xukun ku riday lix dhalinyaro ah oo lagu soo eedeeyay in ay ku kaceen falal liddi ku ah amniga iyo xasiloonida. Maxkamada ayaa dhalinyaradaan ku riday xukun labo sanno ah, kadib markii lagu helay In ay dhaawac ugeysteen Haweeney, Sidoo kalane ay ka furteen moobaylkeedii Dhibbane lagu magacaabo Sundus Cabdiraxmaan Maxamed. Ku...
UN hails adoption of 2018 Somali government budget
Mogadishu (HOL) – The United Nations has commended Somalia’s recent adoption of the federal budget terming it a milestone in the country’s economic development which recovering from more two decades of war. The Special Representative of the Secretary-General for Somalia and Head of the United Nations Assistance Mission in Somalia (UNSOM), Michael Keating...
Al Shabaab oo 5 ruux ku toogtay Fagaaro ku yaal gobolka Bay
Xarakada Al-shabaab ayaa shan qof waxaa ay ku toogatay fagaare ku yaalla degaanka Iidaale ee Gobolka Baay,kuwaas oo lagu eedeeyay in ay basaasiin ahaayeen. Iidaale waxaa ay 60KM u jirtaa Magaalada Baydhaba ee Xarunta Gobolka Baay,waxaana Raggan la toogtay lagu eedeeyay in ay u shaqeynayeen Hay’adaha sirdoonka Dowladda Soomaaliya,Dowladda Mareykanka iyo dowlado kale. Magacyada...
Prof: Saciid Ciise “Xadgudubka iyo gaboodfalka loo geysto mucaaradka siyaasadeed
Xadgudubka iyo gaboodfalka loo geysto mucaaradka siyaasadeed wuxuu ka turjumaya naceyb loo qabo dowlad wanaaga iyo dhaqan muujinaya kelitalisnimo. Falalka nuucaasa waa mid saameeyntiisu ay gaarsiisan tahay xadgudub wadareed. Jawaabta ay leedahayna waa in si wadara looga soo horjeesto hogaanka inta aysan ku sii fogaan dhibaateynta bulshooyinka diidan taloxumada dalka lagu...
Sida wararku ay sheegayaan Waxaa Saakay Degmada Waaberi Dabley hubeysan ay ku dishay Degmada Waaberi ee Gobolka Banaadir Gudoomiye Laameed. Kooxda Dilka Geysatay oo la sheegay in ay hubeysnaayeen ayaa la sheegayaa in ay saarnaayeen Mooto, kadib Dilkane ay goobta isaga baxsadeen sida Mustaqbal ay u sheegeen Illo Wareedyo. Ciidamada Katirsan Dowladda ayaa goobta dilka uu...
Abaaldhaca Siyaad Barre waxaan ku baranay Gabeyre, Sidoo kale abaaldhaca Farmaajo waxaan ku baranay Shakuur. Dib dambe ma loo aamini doona dadka nuucaas ah!!! Labaduba waxey ku soo cid galeen caadifad iyo naceyb ay u qabaan dadkii ay xilka kala wareegeen. Labaduba ergo aamina waa u noqon waayeen sharciga dhowraya xuquuqda dadka iyo dowlad wanaaga. Labaduba awoodooda waxaa...
1.Hogaamiyaha diciifka ahi waxa uu jecel yahay in la ammaano oo la bogaadiyo. Waayo dhaliisha uma adkaysan karo, dadkuna aakhirka waaba ay ka baqaan in uu wax-yeelo. Waxa uu leeyahay dabeecaddda maska oo cidda uu ka shakiyo waa uu baqasho dhagraa! 2. Hoggaamiyaha diciifka ahi waxa uu aad uga baqaa wax walba oo cusub, waxa bir kaga adag in uu tijaabo cusub sameeyo amma...
Farmajo waxuu lahaa taagerro badan markii ladoortay balse wax walibo wey is badaleen markuu magacaabay qeyre oo laheyn aragti iyo qibrad lagu maamulo wadan somaliya oo kalaa Farmaajo waxuu sameeyay inuu faraha oga qaado howlaha xukuumada inuu maamulo kheyre balse taas waxey sababtay inuu khere Oo laheyn qibrad badan inuu usoo jiido farmaajo mucaarado xoogan oo oga imaaneyso...
Afhayeen Jawaari oo Canaantay Xeer Ilaaliyaha Qaranka
Guddoomiyaha Golaha shacabka ayaa ku dhaliilay Xeer Ilaaliyaha in iyadoo aanu Guddoonka soo gaarin warqadii codsiga xasaanada uu saxaafada ka sii daayay, isla markaana ka sheegay magacyada labada Xildhibaan, taasoo lagu sheegay inay mid qalad ah oo baal marsan sharciga. Sidoo kale waxaa Xeer Ilaaliyaha Talooyin loogu soo jeediyay in marka uu ka hadlayo arrimaha xasaasiga...
FARIIN KU SOCOTA MADAXWEYNE FARMAAJO: FADLAN AQRI
Madaxweyne Farmaajo, waxaan aad ugu faraxsanahay iney Soomaali oo dhan (celceliska dareenkeyga) kuu istaageen. Markii lagu doortay, Xamar badi dadku wey kuu sacabba tumeen, waddooyinka ayay isugu soo baxeen, waxayna kula wadaageen iney aad ugu farxeen inaad adigu doorashada kusoo baxday, oo xitaa ciidamadii baa farxad la ilmeeyay habeenkii aad dadka iyo dalka u noqotay...
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka, Dr. Axmed Cali Daahir ayaa todobaadkan sameeyay hadalo Marin kale u leexiyay siyaasadii maalinlaha aheyd ee dalka ka jirtay. Axmed Cali Daahir oo ka war haya isbadal ku soo socda Laanta Garsoorka dalka ayaa ka faa’iideystay fursad qaali ah oo uu ka helay kooxda Naf la-caariga ah ee Nabad iyo Nolol. Madaxweyne Farmaajo ayaa horay u sheegay...
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka Dr. Axmed Cali Dahir ayaa ka hor-yimid go’aankii Guddoomiyaha Maxkamadda Gobolka Banaadir uu ku soo afjaray kiiskii Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur Warsame ay ku soo eedeysay Xafiiska Xeer Ilaalinta oo ahaa fal dambiyeed qiyaano qaran iyo qaran dumis. Dr. Axmed Cali Dahir oo shir jaraa’id ku qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay in go’aanka...
Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa goor dhow ku dhawaaqday in xoriyadiisa dib loogu soo celiyay Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur, kaddib markii ay maanta fadhi ka yeelatay dhageysiga dacwada loo heystay. Xeer Ilaalinta ayaa Maxkamadda ku horkeeni weyday caddeymo rasmi ah muddo 24 saac loo siiyay, waxaana ay ku guuldareystay dalabka ah in muddo 5 cisho la siiyo, si ay baaritaanka...
Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur Warsame oo goor dhow shir jaraa’id ku qabtay banaanka hore ee Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa sheegay inay guuleysatay Cadaaladda, kaddib markii maxkamadda ay go’aamisay in aanu wax dambi ah laheyn, dibna loogu soo celiyay xoriyaddiisa. C/raxmaan C/shakuur ayaa sheegay in falkii lagu soo weeraray gurigiisa uu ahaa gardaro iyo dulmi, laguna...
Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa sii deysay Siyaasiga C/Raxmaan C/Shakuur Warsame kaddib markii lagu waayay eedihii loo soo jeediyay. C/Raxmaan oo Shir jaraa’id ku qabatay Xarunta Makxmadda ayaa sheegay in uu ku faraxsanyahay siideyntiisa,waxaana uu ku baaqay in sharciga la ilaaliyo. Dhinaca kale waxaa uu sheegay in Maxkamadda qeybteeda 1aad ay dhamaatay islamarkaana...
Jubbaland oo Kismaayo ka mamnuucday goobaha fadhi ku dirirka iyo Gaadiidka badan ee Aroosyada lagu Galbiyo. Maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ee gobalka Jubada Hoose ka mamnuucay goobaha la isugu yimaado ee looga hadlo Arimaha siyaasadda iyo amaanka ee deegaanada maamulkaasi taas oo ka dhaqan gashay Kismaayo. Amarkaan oo aan Warbaahinta lala wadaagin ayaa soo...
Goordhaw Waxaa Xarunta Maxkamada Gobolka Banaadir Ka furmeysa dacwada la xiriirta Xeer ilaalinta Qaranka Oo Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ku soo eedeysay Qaran dumis. Hada Waxaa Gudaha Xarunta Maxkamada Gobolka Banaadir ku sugan Cabdiraxmaan Cabdishakuu Warsame oo ah Eedeysane ay Soo EedeysayXeer ilaalinta Soomaaliya Waxaa sidoo kale dhinac Fadhiya Abshir Maxamed...
Waa Ogahay in aan la hadli karin iyada oo uu jiro Dastuur kmg ah, oo xuquuqda iyo Xorriyaadkana si fiican u Qeexaya, haddana ficilka xukuumaddu waxa uu u muuqda sida in ay laashay Dastuurka, dalkuna yahay Baarlamaan iyo Maxkamado la’aan. Raisalwasaaruhu isaga oo ku cusub siyaasadda, dulqaadkiisu aad u yar yahay ayuu ku darsaday fudeyd iyo u fiirsasho la’aan, Sida...
Xildhibaan Cabdullahi Shaacir iyo Xildhibaan Cabdiraxmaan Dheere ayaa la xaqiijiyey in ay Codad Sir ah ka duubaan Xildhibaanada Baarlamaanka. Qaar ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka oo aan la hadlay ayaa ii Cadeeyey in labadaasi Xildhibaan uu Fahad Yasiin soo adeegsaday iyagoo uu ku xiran yahay Cod duube aan la dareemi karin ama aan loo jeedin. Labadaasi Xildhibaan ayaa...
Sayid Cali Macalin Cabdulle oo ah xubin ka mid ah Xisbiga Wadajir ayaa sheegay in weerarkii habeenkii Axada ay Ciidamo ka tirsan kuwa Ammaanka ku qaadeen Guriga C/raxmaan C/shakuur uu ahaa qorshe la doonayay in lagu khaarijiyo. Sayid Cali oo warar markii hore soo baxayeen sheegayaan in lala xiray C/raxmaan C/shakuur ayaa sheegay inuu ka badbaaday weerarkaas, isla markaana...